Konke Okufuneka Ukwazi Ngama-Acids, Bases, kunye ne-pH
I-Acids, i-Bases, ne-pH
Funda malunga nama-acids, iziseko, kunye ne-pH, kuquka iinkcazo kunye nokubala.
Chris Ryan / Getty Izithombe
I-Acids ivelisa iiponononi okanye i-H + ion ngelixa iziseko zisamkela iiproton okanye zenze i-OH - . Ngaphandle koko, i-acids ingabonwa njengabaxhamli bee-electron kunye nabasiseko njengabaxhasi bombini. Nazi iindlela zokuchaza i-acids kunye neziseko, ii-acids kunye neziseko kunye nokubala kwesampula.
Imigangatho-siseko ye-Acid kunye neenkcazo
Iimandla eziMandla kunye neziThuthi ezinamandla
Izakhi zoLuntu oluNgenisayo
Uluhlu lweZiseko ezisisiseko
Iimpawu zePH kunye nokubala
Ann Cutting / Getty Izithombe
i-pH yinkalo ye-hydrogen ion (H + ) yokuxininisa kwisisombululo esinamandla. Ukuqonda i-pH kunokukunceda ukuba uqikelele iipropati zesisombululo, kubandakanywa nendlela eya kuzaliswa ngayo. I-pH ye-7 ithathwa njengengathathi hlangothi. Ixabiso le-pH elisezantsi libonisa izisombululo ezicacileyo ngelixa ixabiso eliphezulu le-pH linikezelwa kwi-alkaline okanye izicwangciso zesisiseko.
I-pH Imilinganiselo - Yintoni i-pH?
Ukuphononongwa kweeMvavanyo eziqhelekileyo zePH
I-pH Isilinganiselo seMichiza eziQheleleyo
Yintoni i-pH yokuma?
Ngaba unako ukuhlawula i-pH?
Itheyibhile ye-pH - Iikhemikhali zasekhaya
Iimpawu ze-pH eziKhaya naseJustini
Iiprojekthi kunye neMiboniso
I-medioimages / iPhotodisc / Getty Izithombe
Kukho ezininzi iimvavanyo, iiprojekthi kunye nemiboniso onokuyenza ukuze uhlole i-acids, iziseko kunye ne-pH. Uninzi lweempembelelo zokutshintsha umbala luquka i-acids kunye neziseko, kubandakanye ukuphendula kwewashi kunye nokunyamalala kwinki.
Isiboniso seBlue Bottle
Yenza Ukutshatyalaliswa Ink
Yenza iklabishi ebomvu ipH Indicator
Ezinye ii-Acid-Base Demonstations
sanjeri / Getty Izithombe
Ezi zikhethi zokukhetha ezikhethiweyo ukuba uqonda kakuhle kangakanani i-acids, isiseko kunye ne-pH.
Isiseko se-Acids kunye ne-Bases Quiz
Iimandla ezinamandla kunye neziThuthi eziNzileyo kunye neComents Quiz
I-pH yeMveliso yeeMveliso zeMveliso
Iphepha le-Avogadro Example Example of Chemistry Problem
Ukuxhaswa kunye nokuNciphisa Umzekelo Isixazululo
Ukuguqula iFahrenheit kwiCelsius
Umthetho kaHenry Umzekelo Weengxaki
Izabelo Zobungqina Benza Iingxaki
Ulungelelwano oluqhubekayo kunye nomzekelo wokuba ngumzekelo wokuba neengxaki
Imbali emfutshane yeGhana
Ikhosi yeTurrey Pines yaseMzantsi Afrika (kwaye Musa ukulibala uMntla)
Ukuqhubizwa kwe-Oil First First
Indlela yokucocekisa iiKiano zakho eziKhonkco
Uluhlu lweeNgcaciso: IiNtshumayelo zangoku ziNgcaciso kunye neMigca
Ukwaphulwa kwe-DC v. Heller
Mayelana neLorax nguDkt. Seuss
Indlela yokuphakamisa i-Mainsail
I-Mockernut Hickory, Umthi oqhelekileyo eNyakatho Melika
Iindlela zokuSebenza ngamazwi okuPela
Yintoni i-Bubblegum Music?
I-North American Pronunciation ye-CD Rom / Book